China Granite muchina zvikamu vagadziri uye vanotengesa | Bocheng Co-chisikwa
Nemazvo Granite Base
Isu tinopa zvigadzirwa zvegranite zvemhando dzakasiyana dzemuchina, senge CNC michina uye laser muchina granite zvikamu, yakanyanya kunyatsoita granite cmm muchina chigadziko, Granite chikamu cheDrining Machines, Granite njanji nzira, Granite nzira yekufamba Kureba kweslot ye z axis, Granite Precision Apparatus Chikamu nokuti achiita zvokutemera Machines, Granite Air Kupa. Tinogona kuita chero chimiro, kana iwe uine kudhirowa.
Granite isarudzo inozivikanwa nekuda kwekugara kwayo uye runako rwechisikigo. Granite inozivikanwa nekuda kwekudzivirira kwayo kupisa, kukwenya, uye mavara. Nekuchengetwa kwakaringana uye nekuchengetedzwa, girenayiti inogona kugara makore makumi mashanu pamwe chete uye inokodzera kudyara.
0ur nhema girenayiti girenayiti kuyera michina uye girenayiti zvemagetsi zvinoriumba zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro Jinan Nhema girenayiti. Nekuda kwekukwirisa kwavo, kureba kwenguva refu, kugadzikana kwakanaka uye kuramba ngura, zvave zvichinyanya kushandiswa mukuongorora kwechigadzirwa kwemaindasitiri emazuva ano nenzvimbo dzesainzi senge makanika alaerospace uye zvekutsvaga kwesainzi.
yedu Granite yekuyera maturusi ane anotevera maitiro:
1 Yakakwira chaiyo yakavimbika kugadzikana inopesana ne deform uye yakavimbiswa kurongeka pasi peyakajairika ambient tembiricha
2 Kwete-ngura uye anticorrosion.
3 Pfeka kuramba kwenguva yakareba sevhisi.
4 Chero kucheka kana kukwenya kwenzvimbo inoshanda hakuunze roughedgesiyo inogona kukanganisa iko kuyerwa.
5 Asina magnetization.Machine Zvikamu
6 Glossy nzvimbo isina husimbe kana mabhande kana maturusi ari kufamba pairi.
CNC Zvikamu zvakagadzirwa negranite, kusanganisira base, ikholamu, danda uye njanji, ine yakakwira 6000x3500x600mm.
Pashure: matombo ekuyera egranite
Zvadaro: girenayiti pamusoro ndiro